Desk Nonstop, Author at A complete Nepali news portal based on news & views - Page 121 of 121
तक्मे बुढाकाे यस्ताे छ फूर्के नम्बर वान
१२ भाद्र २०७४, सोमबार १६:४० August 28, 2017 Desk Nonstop
सौगात मल्लको फाटेको जुत्ता र स्टोरी सङ अफ दी इयर
१२ भाद्र २०७४, सोमबार १६:३७ August 28, 2017 Desk Nonstop
के तपाईमा डिप्रेसनको समस्या छ ? एकचोटी यहाँ क्लिक गर्न नभुल्नुहोस्
११ भाद्र २०७४, आईतवार १८:३२ August 28, 2017 Desk Nonstop
एजेन्सी । के तपाइमा डिप्रेशनको समस्या छ ? नआत्तिनुहोस । डिप्रेसनको समस्या पत्ता लगाउन अब गुगलले तपाईलाई मदत गर्नेछ । वेव सर्च इन्जिन गुगलले चाँडै यो सेवा सुरु गर्न थालेको छ । गुगलले डिप्रेशनका बारेमा सर्च गर्नेलाई केही प्रश्न सोध्नेछ । त्यो प्रश्नको उत्तरका आधारमा गुगलले तपाई डिप्रेशनको शिकार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने पत्ता लगाउन […]
११ भाद्र २०७४, आईतवार १६:०५ August 27, 2017 Desk Nonstop